Depiote miisa 73 : Hanohana kandida tokana -
AccueilSongandinaDepiote miisa 73 : Hanohana kandida tokana
Miha mazava ny lalan-kalehan’ireo solombavambahoaka miisa 73 izay tsy mitsahatra ny mamboly korontana eto amin’ny firenena ankehitriny. Ny hanolorana kandida tokana amin’ny fifidianana ny tanjona amin’izany raha ny nambaran’ny sasany tamin’izy ireo. Tetika izay efa tsy miafina intsony manoloana ny fihetsika izay asehon’izy ireo amin’izao fotoana izao. Ny an’ny Mapar, sy ireo mpomba azy toa ny Armada dia efa nazava ny fanambarana nataony nialoha izao fanakorontanana izao, fa hanolotra kandida tokana amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Nanampy azy ireo ankehitriny ireo solombavambahoaka Tim. Ity farany izay efa miezaka ny manilika ny filoha nasionalin’io antoko io amin’izao fotoana izao. Raha tsiahivina tokoa mantsy dia efa nanambara i Marc Ravalomanana fa tsy mihombon-kevitra amin’izay rehetra mikasa ny hanao fanonganam-panjakana. Nazava ihany koa ny fanambarana nataony tany Mahajanga fa hevitr’ireo solombavambahoaka samirery ny fanakorontanana misy ankehitriny fa tsy hevitry ny antoko Tiko i Madagasikara. Nanambara ihany koa ireo depiote Tim tetsy ankilany fa tsy misy hidiran-dRavalomanana ny hetsika ataon’izy ireo, izay manakorontana ny firenena ankehitriny. Na tiana anefa na tsia, dia solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko Tim ry Hanitra Razafimanantsoa sy ny ekipany izao miezaka ny mitsipa-doha laka-nitana izao.
Naleon’izy ireo araka izany nanatevin-daharana ny Mapar, handatsaka an-dRajoelina amin’ny fifidianana. Izany hoe lasa kandidan’ireto solombavambahoaka miisa 73 ireto izany ny filohan’ny Tetezamita teo aloha. Mbola tsy nandà izany rahateo Rajoelina, satria efa ela no nangetaheta seza azo amin’ny fomba moramora. Na ireto solombavambahoaka Tim ireto aza efa nanary ny anaran’ny antoko nahalany azy, fa dia efa lasa hoe solombavambahoakan’ny fanovana hono no hiantsoana azy, raha miezaka ny manasongadina ny antoko nahalany azy kosa ireo solombavambahoaka Mapar. Mazava ihany koa ny fanapahan-kevitr’ireto solombavambahoaka miisa 73 ireto fa hanao fiaraha-mitantana ny Tetezamita vaovao. Tsapa izany amin’ny alalan’ny fanambarana ataon’izy ireo mandritra ny fotoana hanidiany ireny minisitera ireny ny amin’ny hoe « miandry ny minisitra vaovao ianareo vao miverina miasa ». izany te hamerina ny sarin’ny HAT tamin’ny fotoan’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009, dia hiisa 73 ireo hiara-hitantana ny firenena. Izany hoe hanohana an’i Andry Rajoelina amin’ny fifidianana, saingy mialoha izay dia hiaraka hitantana Tetezamita aloha ireto depiote ireto raha ny eritreriny.